General Horses Info│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
Horse info provides some interesting facts about horses in general. Horses being herd animals are known to follow their herd leader for food and safety. This capability ofahorse allowsahuman rider to act likeaherd leader and make the horse learn and follow instructions. It takesagood amount of training with proper positive and negative inducements to makeahorse compliant and easy to ride. Since ancient times horse has always beenadomestic animal. Being of domestic help, the training methods also date back to ancient times. This applies to horse breeding as well. A herd of horses consists ofanumber of female horses (mares) and immature horses with justafew males (stallions.) The leader mare is called alpha mare. Horse Gaits ယေဘုယျအနေဖြင့်,ahorse can walk with four different types of gaits: walk, trot, canter, and gallop. A horse walk is very simple. He flags on one of his four legs in the air at any give time. Horses are trained to walk on subtle cues like squeezing the sides or releasing and pulling up the reins. A horse trot or jog results when his foreleg and the opposite hind leg simultaneously touch the ground. There are different waysahorse might trot. Example: sitting oraposting trot. Canter or lope isathree beat gait in which his foreleg and the opposite hind leg simultaneously hit the ground, but the other two legs work in isolation with each other. A galloping horse uses two paired legs to propel itself with full speed. Example: the wayahorse runs in races. Thoroughbred Horses The thoroughbred horse breed came into existence in the 18th century in England. It was the time when mares were crossbred with imported Arabian stallions. The breed that came into existence with this experiment is well known for its distance running abilities and used in races. General Horses Info
သင်တစ် ဦး စျေးပေါလျှပ်စစ် Scooter ဘယ်လိုရပါသလဲ?
Hung Gar Kung Fu ကျွမ်းကျင်မှု၏သော့ချက်များ
ပိုမိုကောင်းမွန်သောတောင်တက်ခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက် LED မီးလုံးကိုအသုံးပြုပါ
Brett Favre 1991 မူကြမ်းနေ့ရွေး
အဆင့်မြင့်လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည်ဂေါက်သီးရိုက်စက်များရောင်းချခြင်းနှင့်အတူ, တ ဦး တည်းဖြစ်နိုင်သည်တစ် ဦး ကိုလက်လွတ်နိုင်ဘူး “အစစ်အမှန်” ဂေါက်သီးဆိုင်. ထုံးစံအတိုင်း, ဂေါက်သီးစတိုးဆိုင်များတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ရှိသည်, အကောင်းဆုံးမဟုတ်လျှင်, ဂေါက်သီးကစားသူတစ်ယောက်လိုအပ်သည့်ဂေါက်သီးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ. ဂေါက်သီးကလပ်အသင်းများမှဂေါက်သီးဘောလုံးအထိအရာများအထိဖြစ်နိုင်သည်, ပိုစတာများအထိ, ရှပ်အင်္ကျီများ, နှင့်နောက်ခံပုံများ. ဂေါက်သီးဆိုင်အများစုသည်စိတ်ဝင်စားသောဂေါက်သီးသမားအတွက်သင့်တော်သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုသေချာစေရန်အာရုံစိုက်သည်. သူတို့ကမှန်ကန်တဲ့ကလပ်နှင့်သင့်လျော်သောဂေါက်သီးဘောလုံးကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုအရိပ်အမြွက်ပေးလိမ့်မည်. ဂေါက်သီးဆိုင်များသည်ဂေါက်သီးနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများသာမကအချို့သည်အားကစားနှင့်ပတ်သက်သောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဗဟုသုတများကိုလည်းပေးသည်. အပိုဝန်ဆောင်မှုများကလပ်ပြုပြင်ခြင်းများပါဝင်နိုင်သည်, ကလပ်လျောက်ပတ်, နှင့်လွှဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ. အဆိုပါဂေါက်သီးဆိုင်အများစုသည် True Temper Shaftlab နှင့် Achiever Launch Monitor လွှဲပြောင်းမှုများကိုစစ်ဆေးသည်. ဒီစက်တွေကတိုင်းတာတယ်, ဘောလုံးအမြန်နှုန်းမှ, အကွာအဝေးသယ်ဆောင်ရန်ကလပ်ခေါင်းကိုမြန်နှုန်း. သူတို့ကအစအလွန်အကျွံ deflecton နဲသရုပ်ဖော် printouts ပေး, ရိုးတင်, downswing အချိန်နှင့်မျက်နှာထောင့်. ဒါ့အပြင်, ဒေသခံအကောင်းမြင်သူများထင်ထားသည့်ဂေါက်သီးသင်တန်းများပေးသည့်အခြားဂေါက်သီးဆိုင်များရှိသည်. အားကစားအပေါ်အမျိုးသမီးဆေးခန်းနှင့်အတူငယ်ရွယ်များအတွက်ဂေါက်သီးသင်ခန်းစာများကိုလည်းကမ်းလှမ်းနိုင်ပါတယ်. ဂေါက်သီးစုဆောင်းသူများသည်ဂေါက်သီးဆိုင်၌စိတ်ဝင်စားစရာပစ္စည်းများစွာကိုတွေ့လိမ့်မည်. ဝါသနာရှင်များသည်ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးကစားသမားအချို့အသုံးပြုသောဂေါက်သီးဘောလုံးများကဲ့သို့စုဆောင်းသောပစ္စည်းများကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်. လက်မှတ်ထိုးပစ္စည်းများကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်. Plus အား, ထူးခြားသောဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းများပြုလုပ်သောဂေါက်သီးဆိုင်များရှိသည်. ဤအရာများသည်အသုံးအများဆုံးမှဖန်တီးမှုအရှိဆုံးဂေါက်သီးဆုလက်ဆောင်များအထိမည်သည့်အခါသမယတွင်မဆိုရနိုင်သည်. အများစုမှာဂေါက်သီးဆိုင်ပိုင်ရှင်များသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဂေါက်သီးသမားများဖြစ်ကြသည်. အများအားဖြင့်, ဂေါက်သီးကစားခြင်းမှအနားယူပြီးနောက်ဂေါက်သီးဆိုင်တစ်ခုကိုဖွင့်ထားကြသည်. အများစုကစီးပွားရေးသမားများလိုပဲ, သင်ရောင်းနေသောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အသည်းအသန်ဖြစ်ခြင်းသည်ကောင်း၏. ဒါ “စိတ်အားထက်သန်မှု” ဂေါက်သီးဝယ်သူအားစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ငွေမဝယ်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်. THGOLF စတိုးဆိုင်
အကောင်းဆုံးဂီတပညာရှင်ဖြစ်ရန်သင်တယောမှန်ကိုဝယ်ယူရန်နှင့်သင်၏တယောနှင့်လေးကိုကောင်းစွာဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။. သင်၏တယောကိုသင်မ ၀ ယ်ခင်မည်သည့်အရွယ်အစားရှိမည်သည့်တယောကိုရှာဖွေရန်အတွက်သင်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်. သင်မည်သည့်အရွယ်အစားကိုလိုအပ်သည်ကိုသိပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်, မင်းစျေးဝယ်လို့ရပြီ. သင်ရုံကစားရန်စတင်နေပြီဆိုရင်, ထို့နောက်သင်ကအစပြုသူများအတွက်ပြုလုပ်ထားသောတယောကိုစတင်ချင်ပေမည်. ဤရွေ့ကားအသစ်များတယောများမှာအစပြုသူများသာပြုလုပ်နိုင်သည်. သင်သည်တယောကိုကြာကြာကစားမည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကောင်းသောတယောကိုသင်ဝယ်ချင်လိမ့်မည်. ပိုကောင်းတယော, သူတို့စျေးကြီးလိမ့်မယ်စျေးကြီး. သင်သည်သင်၏တယောဝယ်ပြီးနောက်, သငျသညျကသင့်လျော်သောဂရုစိုက်ချင်ပါလိမ့်မယ်. သင်၏တယောကိုစိုထိုင်းဆအပြင်အလွန်အမင်းအပူနှင့်အလွန်အမင်းအေးသောအပူချိန်များမှကာကွယ်ပါ. သင်၏တယောကိုဖုန်နှင့်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်။ သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ. သင်၏တယောပေါ်ရှိမည်သည့်အက်ကြောင်းကိုမဆိုစောင့်ကြည့်ပါ. သူတို့မကောင်းရင်, သင်ပြုပြင်ရန်အတွက်လိုအပ်သည်. တံတားပေါ်မျက်စိထားပါ, ကျောက်စိမ်း, ကုန်းနှီးနှင့်လက်ဗွေ. မင်း ၀ ယ်တဲ့အခါဝယ်တယောဟာအသေအချာကြည့်ပါ. အကယ်၍ သင်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုမေးမြန်းလိုလျှင်တယောရိုက်သူသို့မဟုတ်သံစုံတီးဝိုင်းဒါရိုက်တာနှင့်တိုင်ပင်နိုင်သည်. သင်၏လေးကိုလည်းကောင်းစွာဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်. တယောလေးကိုဂရုစိုက်ရန်မလွယ်ကူပါ. သင်၏လေးကိုအသုံးပြုသည့်အခါတိုင်း၎င်းကိုအမှုထဲသို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီ၎င်းကိုလျှော့ချသင့်သည်. သင်တို့သည်လည်းတစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်ထိန်းထားသင့်ပါတယ်. သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောတယောကိုရှာပါ, လေးနှင့်လေးကိုသန့်ရှင်းစွာထားပါ။ သင်၏တယောနှင့်လေးသည်ကြာရှည်စွာတည်ရှိနိုင်သည်။ သင်၏တယော: လျောက်ပတ်နှင့်စောင့်ရှောက်မှု
Selecting and acquiring the ideal fishing boat isareal art for someone who has already gone through many experiences as far as boating is concerned. သို့သော်, it can beadaunting task to those who have not yet experienced buyingafishing boat. To make the activity easier for the first timers, here isalist of tips that they can use when choosing an ideal fishing boat. 1. It is important to consider the purpose of the fishing boat. Buyingafishing boat has only one purpose: to be used in fishing. သို့သော်, before choosing the perfect fishing boat, it is important to consider also the other purposes. ပထမ, the place where the fishing boat will be used should be taken into account. Will it be in the ocean or in other bodies of water like lakes? ဒုတိယ, the time of the day it will be used. Will it be for day trips or for overnight fishing activities? If the fishing boat will be used for ocean cruising and overnight stays, it would be better to buyafishing boat that hasahull. This is specifically designed for rough waters. This design is meant to ride with the waves, hence, providing more comfort to anglers while on board. 2. The budget When buyingafishing boat, it is important to know if the buyer can afford to acquireaboat. Fishing boats, or any boat for that matter, can be very expensive. ထို့ကြောင့်, the buyer should know how far his budget would go as far as fishing boat prices are concerned. 3. The warranties It is extremely important to know if the fishing boat hasawarranty. It should be analyzed and meticulously scrutinized because not all warranties are created equal. ထို့ကြောင့်, it is best to buyafishing boat from dealers that will provide the necessary services in case their product is found to be defective. 4. The certification When buyingafishing boat, it is important to take note if it is certified by the ‘National Marine Manufacturers Association’ or the NMMA. This agency guarantees that the certification they give to every boat manufacturer isaguarantee that the fishing boat had passed the agency’s standard of excellence. The bottom line is that, people should do more than just look around when choosing the ideal fishing boat. They should learn how to look for the important details in order to ensure that the boat they have acquired is definitely worth their money. Tips On Buying Fishing Boats
ကျောက်တောင်တက်ခြင်း ‘ သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုထိန်းသိမ်းပါ
ကျောက်တောင်တက်ခြင်းသည်ကြွက်ပြိုင်ပွဲမှလွတ်မြောက်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, အစွန်းပေါ်မှာနေထိုင်ပြီးအမြင်တစ်ခု heck ရ. အို, သင်၏ကျောက်တောင်တက်အတွေ့အကြုံများသည်အချိန်နှင့်အမျှပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်. ယင်းကိုကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာကျောက်တောင်တက်ဂျာနယ်ကိုသိမ်းထားရန်ဖြစ်သည်. ကျောက်တောင်တက်ခြင်းဆိုင်ရာဂျာနယ်များသင်၏နောက်ဆုံးရော့ခ်တောင်တက်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အချိန်ယူပါ. အဘယ်အရာကိုသင့်စိတ်တွင်ထွက်ကပ်လျက်? သငျသညျတနင်္ဂနွေအဘို့အ Joshua Tree မှာကျောက်သားသွားသလား? ကျောက်တောင်တက်တာသင်ပထမဆုံးအကြိမ်စဉ်းစားကြည့်ပါ. သေချာပါတယ်, ပထဝီအကြောင်းသင်အနည်းငယ်မှတ်မိသေးတယ်, သင်နှင့်အတူလိုက်ခဲ့သူများ၊ အထူးသဖြင့်ကျောက်တောင်တက်လမ်းကြောင်းများ. သင်မေ့နေသောအတွေ့အကြုံများမှာအချိန်ပျောက်ကုန်ပြီ. သငျသညျကျောက်တောင်တက်ဂျာနယ်စောင့်ရှောက်လျှင်, ဒီအမှုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. အချိန်တစ်လျှောက်လုံးဂျာနယ်များကိုထိန်းသိမ်းထားသောထင်ရှားသောသာဓကများရှိသည်. ဒါပေါ့, အန်းဖရန့်၏ဒိုင်ယာရီသည်အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်သည်. သူမ၏ဒိုင်ယာရီထဲမှာ, သူမ၏မိသားစုသည်နာဇီများထံမှပုန်းအောင်းခဲ့သည့်နှစ်နှစ်အတွက်အန်းသည်မှတ်ချက်ပေးပြောကြားခဲ့သည်. သင်၏ကျောက်တောင်တက်အတွေ့အကြုံများသည်ပိုမိုပေါ့ပါးသောနှလုံးသားဖြစ်လိမ့်မည်, ဂျာနယ်တစ်စောင်ထားရှိခြင်းကသူတို့ကိုနှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှမှတ်မိစေလိမ့်မည်. ကျောက်တောင်တက်သောဂျာနယ်တစ်ခုသည်ထူးခြားသောလက္ခဏာများပေါင်းစပ်ထားသည်. ပထမ, အခြားအရာများအတွက်မလိုအပ်သောနေရာယူရန်မလိုပါ. ဒုတိယ, ၎င်းကို element များမှကာကွယ်ရန်အမှုတစ်ခုရှိသင့်သည်. တတိယ, သင်၏မှတ်စုများကိုရေးသားရန်ဂျာနယ်တွင်ကွက်လပ်များပါ ၀ င်သင့်သည်. စတုတ်ထ, တိကျသောအရာများအပေါ်မှတ်စုများသိမ်းထားရန်သင့်အားသတိပေးရန်ဂျာနယ်တွင် cue နေရာများပါ ၀ င်သင့်သည်. တွေကိုပါဝင်သင့်ပါတယ်: 1. သငျသညျနှငျ့ရော့ခ်တောင်တက်သွားသူကားအဘယ်သူ, 2. ကျောက်၏သဘောသဘာဝနှင့်အရည်အသွေး, 3. ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်၊, 4. ပထဝီအနေအထားနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေ, 5. ကျောက်တောင်တက်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့သောထူးခြားသောအရာများ, 6. သငျသညျရေခဲနှင့်အခြားနည်းလမ်းကိုတက်ယူလမ်းကြောင်းများ. 7. သင်တောင်တက်ရန်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများ, နှင့် 8. သင်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်ဒေသခံများသို့မဟုတ်အခြားတောင်တက်သမားများကပေးသောအတွင်းပိုင်းအချက်အလက်. ကျောက်တောင်တက်ခရီးရဲ့အဆုံးမှာ, သင်သည်သင်၏ဂျာနယ်ကနေအောက်ပါရနိုင်ဖြစ်သင့်သည်: 1. သင်တွေ့ခဲ့သောအခြားတောင်တက်သမားများအတွက်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်, 2. အကယ်၍ သင်တည်နေရာကိုဒုတိယအကြိမ်တက်ပါကသင်သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး အားလမ်းကြောင်းလမ်းညွှန်တစ်ခုပေးရန်လုံလောက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ. 3. နှစ်များအကြာတွင်ထင်ဟပ်ဖို့အမှတ်တရများ, နှင့် 4. သင့်သူငယ်ချင်းများထံသွားရန်တစ်ခုခု, ကလေးများနှင့်မြေး. သင်၏ကျောက်တောင်တက်ဂျာနယ်မှအများဆုံးရရှိရန်, သင်တောင်တက်မတိုင်မီနှင့်သင်ပြန်လာသည့်အချိန်တွင်ယင်းကိုရေးသင့်သည်. တောင်တက်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်သင်၌မတူညီသောဆွဲဆောင်မှုများကိုတွေ့မြင်ရန်အမြဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်. သင်ထင်သည်ထက် ပို၍ ခက်ခဲသည်သို့မဟုတ်ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့သည်? ရော့ခ်တောင်တက်ခြင်းသည်သဘာဝနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်အပြင်တနင်္ဂနွေနေ့များအတွက်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်. သင့်ရဲ့ကျောက်တောင်တက်ဂျာနယ်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့သေချာအောင်လုပ်ပါ. ကျောက်တောင်တက်ခြင်း ‘ သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုထိန်းသိမ်းပါ
Jay Cutler : 2006 နေ့ပုံမူကြမ်း
Jay Cutler was born on April 29, 1983 in the small town of Santa Claus, အင်ဒီယားနား. At6ခြေထောက်3လက်မနှင့် 230 အလေးချိန်ပေါင်, Cutler is the perfect size for an NFL quarterback. When you combine this with his mobility and ability to throw the long ball, it is easy to see why he is one of the best up and coming players in the league. At Heritage High School Cutler compiled an impressive 26-1 record asastarting quarterback during his junior and senior seasons. Asasenior he led his team toa15-0 စံချိန်, as well asastate 3A championship. Although he wasasolid performer in high school, Cutler did not receive the attention of other quarterbacks across the country. After graduating from Heritage, he took his game to Vanderbilt University. While at Vanderbilt Cutler started 40 consecutive games at quarterback;aschool record. The 2005 season was Cutler’s final year in college, and he made itagood one. သူကရာသီပြီးဆုံးခဲ့သည် 273 ပြီးစီးခြင်း, 3,073 ကိုက်နှင့် 22 touchdown passes. When everything was said and done Cutler had thrown for nearly 9,000 yards in his college career. ထဲမှာ 2006 NFL Draft Cutler was selection by the Denver Broncos with the 11th overall pick. Shortly after the draft he agreed onasix year contract worth $48 သန်း. Afteragood showing during training camp, Cutler leaped from third on the depth chart to second. During preseason games he passed for more yards than any other rookie. About halfway through his rookie season, the Broncos finally made him the team’s starter. In the five games that he started, Cutler amassed 1,000 yards passing and nine touchdowns. The 2007 season will be the first in which Cutler is the team’s full-time starting quarterback. It is safe to say that Cutler as well as the Broncos are excited to see what this will bring. With all of the tools to beagreat quarterback, it is onlyamatter of time before he moves to the top of the league. Jay Cutler : 2006 နေ့ပုံမူကြမ်း
အဆိုပါ San Antonio တွင်စပါး: San Antonio တွင်ဂုဏ်ယူပါတယ်, အပိုင်း 2
San Antonio တွင်စပါးအသင်းသည်၎င်းတို့၏အသင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ကစားသမားတစ် ဦး အားအသင်းမှအနားယူရန်အတွက်ငှားရမ်းခြင်းဖြင့်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။, အရာမဆိုဘတ်စကက်ဘောကစားသမားများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်. ယခင်စပါးကစားသမားများထဲက, Johnny Moore, အဘယ်သူသည် 80s အတွက်ကစားခဲ့ပါတယ်, သူ့ရှိခဲ့တယ် # 00 အနားယူခဲ့သည်. Moore သည်အစောင့်အရှောက်နေရာတွင်တည်ရှိပြီးချိုင့်ဝှမ်းအဖျားကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်, ထိုအချိန်တွင်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဆုံးသတ်ထားရန်စွမ်းရည်ရှိသည်ဟုထင်ခဲ့သည်. ကံကောင်းတာက, Moore သည်အပြည့်အဝပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီးကစားခြင်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည် 520 San Antonio တွင်ကစားနည်းများ. James Silas ကိုစောင့်ပါ (#13) ကံမကောင်းတဲ့နံပါတ်လို့ထင်ရနိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်ဒီစပါးကစားသမားသည်, မိမိအဂျာစီအနားယူသောအခါကံကောင်းဆေးလိပ်ဖြတ်ဖြစ်ထွက်လှည့်. 'ဗိုလ်ကြီးနှောင်းပိုင်းတွင်အမည်ပြောင်’ နှင့် ‘မြွေ,’ သူကဂိမ်းများနောက်ကျသို့ရောက်နေချိန်တွင်သူ၏ဘတ်စကတ်ဘောအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်ခဲ့သည်. Sean Elliott သည်, San Antonio တွင်တစ် ဦး ရှေ့ဆက်ကနေကစားခဲ့ပါတယ် 1989 ရန် 1993, အဖြစ်ကနေ 1994 ရန် 2001 သူ့ရှိခဲ့တယ် #32 ဂျာစီဟာ AT ၏ဒိုင်းသို့မြင့်မားသောစေလွှတ်ခဲ့သည်&ရှိ T စင်တာ 2005. သူသည်အသင်း၌ရှိစဉ်ကာလအတွင်းအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်, သူဟာအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ် 1999, စပါးဟာ NBA ချန်ပီယံခေါင်းစဉ်ရရှိခဲ့သည့်အခါ. ဂိမ်းထဲမှာ 2, အနောက်ဘက်ညီလာခံဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွင် Portland Trail Blazers ကိုအနိုင်ယူနိုင်ရန်အတွက်သူသည် Spurs ကိုလက်မလျှော့ရန်ပါးနပ်သောမျဉ်းကြောင်းအတိုင်းလျှောက်သွားပြီးသုံးချောင်းထောက်ပြသည်။. David Robinson (#50) အမွှာမျှော်စင်နှစ်လုံး၏တစ်ဝက်အဖြစ်အမြဲတမ်းလူသိများသည်. အဆိုပါဗဟိုမှစပါးအဘို့ကစားခဲ့ပါတယ် 1989 ရန် 2003 နှင့်လည်းသူ၏နံပါတ်အငြိမ်းစားရှိခဲ့ပါတယ်. သူ့ကိုမကြာခဏပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘတ်စကက်ဘောတွင်ကစားရန်အကောင်းဆုံးစင်တာတစ်ခုအဖြစ်ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်. မှကစားသည် 1974 ရန် 1985, George Gervin သည်သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစားခြင်းကိုလည်းရရှိခဲ့သည် #44 San Antonio အဖွဲ့အစည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအငြိမ်းစားနံပါတ်များရာထူးတွင်ပါ ၀ င်ပါ. ယနေ့အထိ, ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်ပြီးမြောက်နိုင်ခဲ့သူငါးခုသာရှိသည်. အဆိုပါ San Antonio တွင်စပါး: San Antonio တွင်ဂုဏ်ယူပါတယ်, အပိုင်း 2
နှစ်စဉ် FIFA ကမ္ဘာ့ဖလားကစားသမား – ရော်နယ်ဒိုနှင့်သူ၏အောင်မြင်မှုများ
ဘရာဇီးဘောလုံးသမား Ronaldo de Assis Moreira ကို Ronaldinho ဟုလူသိများသော FIFA ကတစ်နှစ်တာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ်နှစ်ကြိမ်ချီးမြှင့်ခံရသည်။; သူသည်တစ်နှစ်တာဥရောပဘောလုံးသမားဆုနှင့်တစ်နှစ်တာကမ္ဘာ့ဖလားကစားသမားဆုကိုလည်းရရှိခဲ့သည်. သူက 'ရော်နယ်အောင်နိုင်' ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရွေးလိုက်တယ်’ ရော်နယ်ဒိုနှင့်တူသောအခြားဘရာဇီးဘောလုံးကစားသမားနှင့်မိမိကိုယ်ကိုခွဲခြားရန်. သူဟာစပိန်ကလပ်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အသင်းတစ်သင်းပါ. ၎င်းသည်စပိန်နှင့်သူ၏ဇာတိနိုင်ငံဘရာဇီးအတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သည်, ထိုကဲ့သို့သောအောင်မြင်သောဘောလုံးသမားဖြစ်ခြင်းသည်. အဆိုပါခွဲခြားကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်အခါ, နည်းပြတစ် ဦး ချင်းစီကကပ္ပတိန်တစ် ဦး ချင်းစီသည်ကမ္ဘာ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှရေးဆွဲထားသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစာရင်းမှသူတို့၏ထိပ်တန်းကစားသမားရွေးချယ်မှုအတွက်မဲပေးခဲ့ကြသည်. စပိန်အခြေစိုက်ကစားသမားများသည်ပြီးခဲ့သည့်လေးနှစ်တာကာလအတွင်းဆုများရရှိခဲ့ကြသည်. ရော်နယ်ဒိုကဘာစီလိုနာအသင်းကိုချစ်, သူကငွေအဘယ်သူမျှမငွေပမာဏကိုအသင်းထံမှဝေးသူ့ကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်. 'ငါဘာစီလိုနာမှာအရမ်းပျော်တယ်၊ ဘယ်နေရာမှာမဆိုပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုတာငါမယုံနိုင်ဘူး', ချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်၌အင်္ဂလန်ကလပ်ချယ်လ်ဆီးကိုအနိုင်ရပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ရော်နယ်ဒိုကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောကြားလိုက်သည်။. စာရေးသူအကြောင်း Jill Woods သည်ကျွမ်းကျင်သောစာရေးဆရာများ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်’ I Bet IAS ရှိလောင်းကစားလုပ်ငန်းအတွက်အားကစားအဖွဲ့. ဤဆောင်းပါးကိုတင်ထားသည့်အတိုင်းပြန်လည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်လွတ်လပ်ပါ. နှစ်စဉ် FIFA ကမ္ဘာ့ဖလားကစားသမား – ရော်နယ်ဒိုနှင့်သူ၏အောင်မြင်မှုများ
အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သောဂေါက်သီးကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများသည်သဘာဝအလှည့်ကျဖြစ်သည်, သင့်ရဲ့ core ကိုထည့်သွင်း. ဒါကမင်းရဲ့လွှဲဖို့အင်ဂျင်ပဲ! သင့်ရဲ့အဓိကအားနည်းနေသို့မဟုတ်ကန့်သတ်သည်ဆိုပါက, သငျသညျသက်ရောက်မှုမှာ clubhead မြန်နှုန်းနှင့်ပါဝါထုတ်လုပ်ရန်အလွန်ခက်ခဲအချိန်ရပါလိမ့်မယ်. ဂေါက်သီးကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းပင်ပန်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, ချွေးစေးနှင့်ထိရောက်သောဖြစ်ဖို့အားကစားရုံ၌တည်၏. အားကစားလေ့ကျင့်မှု၏ဂုဏ်အသရေသည်အမြင့်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးရရှိရန်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကိရိယာအနည်းအကျဉ်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏တန်ဖိုးဖြစ်သည်. အတော်များများကဂေါက်သီးသူတို့တစ်တွေဂေါက်သီးကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အချိန်သို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးခံစားရတယ်; သေးသူတို့ဘောလုံး hit ပါလိမ့်မယ် 2-3 တစ်ပတ်လျှင်ကြိမ်နှင့်ဒေါ်လာရာနှင့်ချီသောကလပ်များနှင့် gimmicky လေ့ကျင့်ရေးအထောက်အကူများပေါ်တွင်ဖြုန်းပါ. ဤအဂေါက်သီးသမားအများအပြားခြေလှမ်းပြန်ယူ။ '' ငါသည်ဤချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူတိုးတက်ပြီလော '' သူတို့ကိုယ်သူတို့မေးလျှင်, ငါသူတို့ထဲကအများစုဟာအဘယ်သူမျှမပြောအလောင်းအစားလိမ့်မယ်. ကသင်၏ပစ္စည်းကိရိယာများမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ခြင်းအဆိုပါအကြောင်းပြချက်, အဲဒါမင်းပဲ! သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကသင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖော်ပြသည်. ကာလ! စက်ကျိုးလျှင်, အဆိုပါလွှဲလွန်းလိမ့်မည်. ငါသည်ဤအလုံအလောက်မပြောနိုင်ပါ. ဂေါက်သီးသမားများကသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဂိမ်းမှစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုနားလည်သည်အထိ, သူတို့ကစိတ်ပျက်လက်ပျက်နှင့်ဂိမ်းကိုဖြတ်ဖို့စဉ်းစားသင်တန်းကိုချွတ်လမ်းလျှောက်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်. ငါသည်အခြားနေ့ကဂေါက်သီးကစားသမားနှစ်စဉ်ဂိမ်းဖြတ်ဘယ်လောက်ကိုးကားတဲ့စာရင်းဇယားဖတ်ပါ. ဒါဟာကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်တယ်! ဤမျှလောက်များစွာသောဂေါက်သီးသမားများအဘယ်ကြောင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်နေကြသနည်းဟုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်? သူတို့ကဒါကိုမခံစားရလို့သာမှန်းလို့ရတယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာအချိန်၊. ရိုးရှင်းသောဂေါက်သီးကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်ခြားနားမှုရှိနိုင်သည်. ငါမင်းတို့ရဲ့အဓိကလှုပ်ရှားမှုကိုပုံဖော်ချင်တယ်’ ဂေါက်သီးလွှဲ၌တည်၏. ဒါဟာ '' အလှည့်!’ ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်သင်သည်သင်၏လည်ပတ်အစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်မဟုတ်ဘူး? ဒါကမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်! သင်အစီအစဉ်တစ်ခုနှင့်အတူတက်လာရန်ရရှိပါသည်; ဂေါက်သီးကြံ့ခိုင်ရေးသင်တန်းပေးသူကိုငှားရမ်းပါ; သို့မဟုတ်ဂေါက်သီးကြံ့ခိုင်မှုကဲ့သို့အသုံးအနှုန်းများဖြင့်စာရိုက်ခြင်းဖြင့်ဝဘ်ပေါ်ရှိပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုရှာဖွေပါ, ဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ခန်း, ဂေါက်သီးရိုက်တာတောင်လုပ်တယ်. ရလဒ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက် ACT ကိုအချိန်အနည်းငယ်စကားပြောပါ. ချက်ချင်းသွားယူပါ! နောက်တဖန်မထားပါနဲ့. များများစားစားကစားနိုင်လေလေ၊. အမြန်ဆုံးရလဒ်များကိုရရန်, ဂေါက်သီးကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်ဤအစီအစဉ်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်သောအခါအဓိကအလှည့်ကျလေ့ကျင့်ခန်းများကိုကြည့်ပါ. အမြန်ဆုံးရလဒ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ခန်း
ပြီးပြည့်စုံသောဂေါက်သီးလွှဲလေ့ကျင့်ခန်းသည်မြင်တွေ့ရခြင်းအတွက်ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်သည်. သို့သော်လည်း၎င်းသည်အောင်မြင်ရန်မလွယ်ကူပါ. ပြီးပြည့်စုံသောဂေါက်သီးလွှဲလေ့ကျင့်ခန်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အကန့်အသတ်ရှိဂေါက်သီးကလပ်နှင့်သင့်လျော်သောနောက်ကျောလွှဲခြင်းဖြင့်စတင်သည်. အကောင်းဆုံးသောဂေါက်သီးလွှဲခြင်း၏ဤအပိုင်းတွင်သင်၏စိတ်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏လည်ပတ်မှုနှင့်လက်မောင်းကိုတိုးချဲ့ရန်ပြင်ဆင်သင့်သည်. သော့ချက်စာလုံးများ: ဂေါက်သီး,ဂေါက်သီးရိုက်,ဂေါက်သီးသင်တန်းဆရာ,ဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ခန်း,ဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ခန်း,ဂေါက်သီးကြံ့ခိုင်ရေး,ဂေါက်သီးသင်ခန်းစာများ,ဂေါက်သီးသင်ကြားခြင်း,golf အကြံပေးချက်များ Article Body: ပြီးပြည့်စုံသောဂေါက်သီးလွှဲလေ့ကျင့်ခန်းသည်မြင်တွေ့ရခြင်းအတွက်ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်သည်. သို့သော်လည်း၎င်းသည်အောင်မြင်ရန်မလွယ်ကူပါ. ပြီးပြည့်စုံသောဂေါက်သီးလွှဲလေ့ကျင့်ခန်းသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အကန့်အသတ်ရှိဂေါက်သီးကလပ်နှင့်သင့်လျော်သောနောက်ကျောလွှဲခြင်းဖြင့်စတင်သည်. အကောင်းဆုံးသောဂေါက်သီးလွှဲခြင်း၏ဤအပိုင်းတွင်သင်၏စိတ်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏လည်ပတ်မှုနှင့်လက်မောင်းကိုတိုးချဲ့ရန်ပြင်ဆင်သင့်သည်. နောက်တစ်ခု, ပြီးပြည့်စုံသောဂေါက်သီးလွှဲလေ့ကျင့်ခန်း၏လှုပ်ရှားမှုများကိုအောက်သို့လွှဲလိုက်သည်, သောကိုယ်ခန္ဓာ၏အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူစတင်သည်, ခြေထောက်နှင့်တင်ပါးအပါအဝငျ. ဒူးနှင့်အတူနောက်ကျောမှရှေ့မှောက်၌အလေးတစ် ဦး လွှဲပြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်, ပေါင်နှင့်တင်ပါးအားလုံးရှေ့သို့ရွေ့လျား. ပြီးပြည့်စုံသောဂေါက်သီးလွှဲလေ့ကျင့်ခန်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ရှေ့ဖနောင့်အပြင်ဘက်ခြေထောက်၏အတွင်းဘက်တွင်အဆုံးသတ်သည်. သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသောဂေါက်သီးလွှဲလေ့ကျင့်ခန်းသည်လွယ်ကူသည်. သို့သော်ပြီးပြည့်စုံသောဂေါက်သီးလွှဲလေ့ကျင့်ခန်းသည်ဂေါက်သီးသမားများအတွက်ဂေါက်သီးရိုက်လေ့ရှိသည့်ဖိအားနှင့်ဖိအားကိုယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့၏ကြွက်သားများနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအဆင်သင့်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ဂေါက်သီးရိုက်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းများတွင်မပါဝင်သောဂေါက်သီးသမားအတွက်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။. ကျွမ်းကျင်သူအများစုသည်သူတို့၏ဂေါက်သီးရိုက်လေ့ကျင့်ခန်းကိုအလွန်အလေးအနက်ထားကြသည်, သို့သော်အပျော်တမ်းသမားအချို့သည်ဂေါက်သီးအားကစား၌အလေ့အကျင့်မပါသည့်အခါကောင်းသောရှေးဟောင်းနေ့ရက်များကိုမစွန့်လွှတ်လိုကြပါ။. ဂေါက်သီးသမားများသည်ဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များကိုလက်ခံလာသည်နှင့်အမျှသူတို့သည်ပိုမိုခက်ခဲလာသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်. စုံလင်သောဂေါက်သီးလွှဲလေ့ကျင့်ခန်းသည်ကြွက်သားများနှင့်အလောင်းများကိုပြင်ဆင်ထားသူများနှင့်သာဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်. The Perfect Golf Swing လေ့ကျင့်ခန်းအောင်မြင်ခြင်း
စက်ဘီး Survival Kit
Safe စီးပါ (စက်ဘီးစီးသူတိုင်းစီးရမည့်ကိရိယာများ) ဒါဟာတကယ်တော့သင့်ကိုယ်ပိုင်စက်ဘီးပေါ်တွင်ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ဖို့အတော်လေးလွယ်ကူသည်. အလုပ်အတွက်သင့်တော်သောကိရိယာများရှိခြင်းသည်တစ်နေကုန်စီးရခြင်းနှင့်စက်ဘီးထုပ်ခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ရာကြောက်စရာကောင်းသည့်အခါအိမ်သို့ပြန်ခြင်းတို့အကြားခြားနားချက်ကိုဆိုလိုသည်. ဒီတော့, သင်စီးရန်အတွက်မည်သည့်ကိရိယာများယူရန်လိုအပ်ပါသလဲ? ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အဓိက, မီးပြားကိုပြုပြင်ရန်သင်ကိရိယာများရှိသင့်သည်. နောက်တစ်ခု, သင်၏ကွင်းဆက်နှင့်ဘရိတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ. စက်ဘီး Survival Kit အခြေခံစက်ဘီးရှင်သန်မှုကိရိယာအစုံပါဝင်သင့်ပါတယ်: တာယာ patch kit Pump Chain tool Screwdriver Spare tube အမျိုးမျိုးအရွယ်အစားရှိလိမ်ဖဲ့ခြင်းများ ပို၍ ကျယ်ပြန့်သောစက်ဘီးရှင်သန်မှုအတွက်ကိရိယာတွင်ပါဝင်သည်။: Chain သန့်ရှင်းရေးစက်ဘီးကွင်းဆက်များအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောပျော်ရည်များလမ်းဘရိတ်မတက်မီစစ်ဆေးရန်ချောချောမွေ့မွေ့ပစ္စည်းများ: သင်၏ဘရိတ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သည်ကိုသေချာစေရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်. အနားကွပ်များပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့်စက်ဘီးစီးရန်လိုအပ်ချိန်တွင်စက်ဘီးကိုအမှန်တကယ်ရပ်တန့်ရန်သေချာစေရန်သင်၏အဘများမကြာခဏစစ်ဆေးပါ. တင်းမာမှုကိုထိန်းညှိခြင်းသည်လည်းအရေးကြီးသည်. ချည်နှောင်: ကွင်းဆက်ကိုလျော့ချပြီး၎င်းကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်သည်. နောက်ကိရိယာတစ်ခုအား brush tool ဖြင့်သန့်ရှင်းပါ. ဂီယာ: derailleur ဂီယာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးစစ်ဆေးပါ. Degrease ကွင်းဆက်နှင့် re-lube. brush tool နှင့်အတူနောက်ဘက် sprockets သန့်ရှင်းရေး. ခြေနင်း: ရိုးလွတ်လပ်စွာလည်ပတ်သေချာအောင်လုပ်ပါ. လျှော့ပေးဘို့အောက်ခြေ bracket ကရိုးစစ်ဆေးပါ. စတီယာရင်: handlebar နှင့်ပင်စည်သေချာအောင်လုပ်ပါ. Frame: ပျက်စီးမှုအတွက်စစ်ဆေးပါ. ထိုင်ခုံကိုသင့်အမြင့်အတွက်သင့်တော်စွာချိန်ညှိပါစေ. ဘီး: စပီကာနှင့်နို့သီးခေါင်များတင်းကျပ်ပြီးဘီးများကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ. တာယာဖိအားနှင့်အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပါ. သင့်ရဲ့ရပ်ဆိုင်းမှုလမ်းဆုံလမ်းခွအမြန်လွှတ်ပေးလျှင်, သူတို့တင်းကျပ်စွာဆွဲထားကြ၏ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ, နှင့်တာယာဖိအားစစ်ဆေးရန်မမေ့ပါနှင့်. စက်ဘီး Survival Kit
Whitewater ဖောင်ဒေးရှင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပါတယ်, Pun ရည်ရွယ်ချက်များ. ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာတဲ့မြစ်ကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်, အိုင်ဒါဟိုအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စိန်ခေါ်မှု. No Return Return မြစ်အိုင်ဒါဟိုသည်အလွန်လှပသောပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်, အဘယ်သူမျှမကြီးမားသောမြို့ကြီးများသို့မဟုတ်သူတို့နှင့်အတူကြွလာသောရလဒ်မြို့ပြ sprawl နှင့်အတူတစ်နေရာ. ၎င်းသည်ကနေဒါနိုင်ငံနယ်စပ်တွင်တည်ရှိသောကျောက်တောင်တန်းဒေသဖြစ်ပြီး Yellowstone အမျိုးသားဥယျာဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်၎င်း၏နယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်တည်ရှိသည်. ဤမျှလောက် uninhibited သဘောသဘာဝနှင့်အတူ, ဖောင်ဖွဲ့ခြင်းအခွင့်အလမ်းများများပြားစွာနှင့်အမျိုးအစားအလိုက် rapids အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်. ဆော်လမွန်မြစ်သည်အိုင်ဒါဟို၏ဗဟို located inရိယာတွင်တည်ရှိပြီး No ပြန်လည်မြစ်မဟုခေါ်သည့်မြစ်ဖြစ်သည်။’ သောသင်၏စီးသောသင်၏ whitewater rafting ဖျော်ရည်မရရှိပါက, ဘာမှမရှိဘူး! အဆိုပါမုန်ဖြစ်ပါတယ် 425 မိုင်ရှည်လျားပြီးကျော် drains 14,000 ပွညျ၏စတုရန်းမိုင်. ဒါဟာအကြီးအကျယ်ကျဆင်းသွားသည် 7,000 မြွေမြစ်နှင့်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါင်းစည်းမှုမှ၎င်း၏မြစ်ရေကနေမြင့်ပေ. ထိုကဲ့သို့သောမြင့်တစ်စက်နှင့်အတူ, သင်ရုံဖောင်ကောင်းသောဖြစ်မယ့်ငါသိ၏. ထိပ်ဖောင်areaရိယာသည်ဆော်လမွန်မြစ်၏အလယ်လမ်းဆုံတွင်ရှိသည်. အဓိကaရိယာသည် 100 မိုင်လမ်းပိုင်းသည်ဖရန့်ချာ့ချ်မှတစ်ဆင့်ပြေးနေသည် ‘ No Return မြစ်ဝှမ်းဒေသ. ဤအပိုင်းသည်မြောက်အမေရိကရှိဒုတိယအနက်ဆုံးအနက်ဆုံးမြစ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်. ဒါဟာအံ့မခန်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆံပင်ပြုစုပျိုးထောင်စွန့်စားမှုစေသည်. ကန့်သတ်ချက်, အမြင့်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အဟန့်အတားများသည်များသောအားဖြင့်အလယ်ပိုင်းလမ်းဆုံလမ်းခွကိုထိပ်ဆုံးသို့ ဦး တည်စေသည်. Rapid အမျိုးအစားသုံးခုနှင့်လေးအကွာအဝေး၌ကျလိမ့်မည်, အဓိကအန္တရာယ်မရှိဘဲက adrenaline အလုအယက်အောင်. တစ်ရက်နှစ်ရက်ခရီးစဉ်များကိုအလယ်လမ်းဆုံလမ်းခွအတွက်စီစဉ်ပေးနိုင်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ဖောင်ဒေးရှင်းများအများအပြားရှိသည်. Kayaking ဟာအရမ်းကောင်းတယ်, ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့လှိမ့်တဲ့နည်းပညာကိုကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်. ပြန်မရောက်နိုင်သောမြစ်ကိုယူခြင်းသည်သင်နှစ်ပေါင်းများစွာသတိရမည့်လုံးဝပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သည်. သတိရပါကကျော်နှင့်အတူတစ် ဦး လူကြိုက်များ destination သည်ဖြစ်ပါတယ် 10,000 လူတွေနှစ်တိုင်းကသွားလာရင်းပေးခြင်း. ချစ်တယ်! အဘယ်သူမျှမပြန်လာမြစ်ဖောင်
အဆိုပါဂေါက်သီး Channel ကိုရှင်သန်နေသည်
Golf Channel ၏ရေပန်းစားမှုသည်ပေါက်ကွဲခဲ့သည်. အပျော်တမ်းဂေါက်သီးကစားသူများသည်သူတို့၏ဂိမ်းကိုတိုးတက်စေမည့်အထူးအချက်တစ်ချက်ကိုရရန်ယခင်ကထက်စောင့်ကြည့်နေကြသည်. အဆိုပါဂေါက်သီးရုပ်သံလိုင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုထံမှအထိကြောင်းကြီးစွာသောအရင်းအမြစ်များကိုရှိပါတယ်, သဲထောင်ချောက်ထဲမှလွတ်မြောက်ရန်အောင်မြင်သောနည်းလမ်းများဖြင့်သင်၏လွှဲကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း. သူတို့၏ online site သို့အနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာသွားပါ။ သင်၏သင်တန်းတိုးတက်မှုအတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များများစွာတွေ့လိမ့်မည်. လူများစွာသည်သူတို့၏ဂိမ်းကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောကဏ္oneများကိုလျစ်လျူရှုထားကြသည်. ဒါကကြံ့ခိုင်ရေးareaရိယာပါပဲ. ဂေါက်သီးရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုသူအများစုသည်၎င်းတို့အားပိုမိုကောင်းမွန်သောကစားရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အရာတစ်ခုသို့မဟုတ်နောက်အဆင့်တွင်ဖျော်ဖြေနိုင်ရန်အထောက်အကူပြုမည့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုရှာဖွေနေကြသည်။. ကောင်းမွန်သောပစ္စည်းကိရိယာများထားရှိခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်. သင်၏ရိုက်ချက်များကိုလေ့ကျင့်ရန်အကွာအဝေးတွင်လေ့ကျင့်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်, ဒါပေမယ့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်လွှဲတစ်ခုချင်းစီကိုမည်သို့တုံ့ပြန်ပုံသည်အရေးကြီးသည်. ဒီနေရာဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားတွေကိုအပျော်တမ်းသမားတွေနဲ့တကယ်ခွဲခြားတာပဲဖြစ်တယ်. ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်း၏ရှုပ်ထွေးမှုသည်ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်များစွာတောင်းဆိုမှုများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားအားလုံးနားလည်ကြသည်. ကျားဝုဒ်လိုအကောင်းအဆိုး, Annika Sorenstam, ဗီဂျေး Singh, နှင့်များစွာသောအခြားသူများကအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးတက်စေရန်အချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်, သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ထိပ်ပေါ်မှာနေဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ချိန်ခွင်လျှာ. ခန္ဓာကိုယ်ကဤတောင်းဆိုချက်များကိုအဘို့အအေးစက်မထားဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်လွှဲကြုံတွေ့နေကြရသည်. ဤသည်ချောမွေ့အပွောငျးအလဲမှသူတို့၏လျှို့ဝှက်ချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်, ကြာကြာ drives တွေကိုရိုက်, နှင့်သံမဏိအာရုံကြော. သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ပုံမှန်သင်တန်းတွင်သူတို့လိုချင်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထုတ်လုပ်ရန်အေးစက်နေသည်. အပျော်တမ်းနှင့်အပန်းဖြေကစားသမားများလည်းအလားတူပင်. ခွန်အားပါသောပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့်, ချိန်ခွင်လျှာ, နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လေ့ကျင့်ရေး, သငျသညျသင်တန်းကိုဝင်သောအခါခန္ဓာကိုယ်အဆင်သင့်ပါပဲ. အေးစက်မှုသည်သင့်အားနောက်အဆင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်. ပါဝါ, ခံနိုင်ရည်, နှင့်ဂေါက်သီးလွှဲအတွက်လိုအပ်သောလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ပစ်မှတ်ထားပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းအားဖြင့်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုအားလုံးတိုးတက်နိုင်ပါတယ်. သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အခြေအနေကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ခြင်းသည်သင့်အားပိုမိုအားကောင်း။ တသမတ်တည်းပြောင်းလဲမှုများပေးသည်ကိုသင်မြင်ယောင်နိုင်သည်ထက် ပို၍ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်. သင့်အိတ်ထဲတွင်ကြံ့ခိုင်မှုကိုထည့်ပါ။ ရလဒ်များကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်. အဆိုပါဂေါက်သီး Channel ကိုရှင်သန်နေသည်
ဒါကြောင့်ငါးဖမ်းပျံသန်းရန်ကြွလာသောအခါ, the jargon can getabit overwhelming if you let it. Here’s the plain English scoop on some common terms used. Understanding Fly Fishing Targets On Flowing Water Fly fishing is many things to many people. For some, it isazen like way to interact with nature. For others, it is test of skill in the act of competing with tricky little fish. For yet others, it isaballet of artistic movements and techniques to obtain the perfect cast for the perfect fly placement that produces the perfect catch. For most, it is just good, clean fun. Whatever your preference, fly fishing hasadefinite language you will need to learn. အစဉ်အလာအရ, fly fishing takes place on flowing water such asariver or stream. There are variations for lake or ocean destinations, but they representaminority. Given this fact, following is an explanation of some of the terms associated with traditional fly fishing. A ‘riffle’ is an area with fast moving water broken up over some solid structure, most often rocks. A rifle can be an excellent location to cast foranumber of reasons. The riffle tends to be an area where insects congregate. Where there are insects, there are fish. In particular, try to cast to areas just downstream of blockages as your catch should be residing in such locations. A ‘pool’ is an area where fast flowing water entersadeeper pool of water. Often found just after riffles,apool offers little in the way of prospecting in the interior. လုပ်တယ်, သို့သော်, offer excellent prospects in the areas where water flows in. More thanafew species of fish feed at such locations as the water flowing into the pool brings food and nutrients with it. ‘Dead water’ refers to an area where there is little or no current. This tends to occur in odd geographic areas, large rivers or areas with flow problems. Dead water is rarelyagood place to fish, so avoid it like the plague. Although notaterm per se, vegetation that grows out into the water and shady shoreline locations are often excellent places to fish. These locations offer the combination of shade and nutrients, which are popular with fish. When referring to shade, it is important to understand that fish are not generally worried about sunburns. အဲဒီအစား, they are worried about dive bombing birds such as Osprey. A fish that cruises along the top ofapool of water in direct sunlight tends to haveavery short life span. သိသာထင်ရှားတယ်, the above representsasmall sampling of terminology related to rivers and moving areas. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, you will at least know why so many anglers talk about riffles. Understanding Fly Fishing Targets On Flowing Water
အခြေခံအားဖြင့်, ရေငုပ်ခြင်းသည်အန္တရာယ်ကြီးမားပြီးအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်. သို့တိုင်, သင်ဤအကြံပေးချက်များကိုလိုက်နာလျှင်, သင်ပျော်စရာရှိနိုင်, ရေငုပ်ခြင်း၏စိတ်ကူးအတွေ့အကြုံ: • ပျော်စရာ scuba diving အတွက်သင့်လျော်သော scuba dive gear ကိုရယူပါ, ဂီယာသည်သင့်အားသင့်လျော်စွာသေချာအောင်စစ်ဆေးပါ. မျက်နှာဖုံးသည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးရေယိုစိမ့်မှုကင်းကင်းဖြစ်သင့်သည်. BCD သည်ရေထဲမစီးနိုင်အောင်လုံလောက်သော snug ဖြစ်သင့်သည်. လုယူသောအရာနှင့်အယပ်များသည်မသက်မသာသို့မဟုတ်အရည်ကြည်ဖုမဖြစ်စေရ. • ရေများများသောက်ပါသင်ကောင်းစွာဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းထားကြောင်းသေချာပါစေ. ရေပဲ, အရက်မရှိဘူး. • ပထမ ဦး ဆုံးလေ့လာပါရေထဲသို့မခုန်ခင်သင်ခန်းစာအချို့ယူပါ. SCUBA ရေငုပ်ခြင်းတွင်မပါဝင်မီအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အေဂျင်စီတစ်ခုမှအရည်အချင်းပြည့်မှီပါ. • သင့်ဆရာ ၀ န်နှင့်စစ်ဆေးပါ။ ရေငုပ်ရန်မဆုံးဖြတ်ခင်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်စစ်ဆေးခြင်းကပိုကောင်းသည်. • ရေငုပ်ရန်လုံခြုံသောနေရာများသင်သည်ရေငုပ်ခြင်းဆိုင်ရာသင်၏လက်မှတ်ရရှိထားသော်လည်း, သင်ရေငုပ်ရန်အရည်အချင်းမပြည့်မီသောအန္တရာယ်ရှိသည့်ရေများ၌သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မမြုပ်ပါနှင့်. အန္တရာယ်ရှိသောလှောင်အိမ်များကိုရှောင်ပါ။ အထူးသဖြင့် Scuba လေ့ကျင့်မှုလိုအပ်သည်. သငျသညျအလွယ်တကူပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ပိတ်မိခြင်းနှင့်လေထုထဲက run နိုင်ပါတယ်. • မိတ်ဆွေတစ် ဦး ရယူပါ. မိတ်ဆွေတစ် ဦး ရယူပါသို့မဟုတ်ရေငုပ်သည့်ကလပ်တစ်ခုသို့ဝင်ပါ. • ရာသီဥတုကိုသိပါရေငုပ်ခြင်းမပြုမီဒေသခံရာသီဥတုအခြေအနေကိုသေချာသိပါ. ရေနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများလုံလောက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ. မိုးရွာတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်မုန်တိုင်းဖြစ်လာရင်အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းပါ. သငျသညျရေ၌ရှိနှင့်နေဆဲလျှင်မူကား, မိုhear်းရွာစေခြင်းငှါသင်ပင်မုန်တိုင်းနားထောင်ကြလော့, ချက်ချင်းရေထဲကတက်ပါ. သင်လျှပ်စီးအားဖြင့်ဒဏ်ခတ်ရချင်ကြဘူး. • သင်၏မျက်လုံးများနှင့်အသားအရေများကိုကာကွယ်ပါ။ နေရောင်ဒဏ်ကိုခံနိုင်သည့်ရောင်ခြည်များမှသင်၏မျက်လုံးများကိုကာကွယ်ရန်နေကာမျက်မှန်တပ်ဆင်ပါ. ရေစိုခံနေရောင်ကာလိမ်းထားသည့်နေရောင်ကာကွယ်ရေးအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည် 15 သင်၏အသားအရေကိုကာကွယ်ရန်. ရေငုပ်သင်္ဘောရေငုပ်ရန်လူသိနည်းသောနည်းများ